Aluminium Window Screen - China Hebei Samsung Metal Wire harato
Aluminium varavarankely lamba atao amin'ny Al-mg firaka tariby tsotra fanenomana. Aluminium tariby harato roa latsaka kilasy: Aluminium manezioma firaka tariby harato sy madio aluminium tariby harato, tenona amin'ny misaraka amin'ny aluminium firaka tariby sy madio tariby aluminium. Al moka lamba Color: volafotsy mamirapiratra na saribao. Aluminum firaka bibikely Fitiliana dia lafo kokoa noho ny Fiberglass harato fa mateza kokoa. Aluminium projection dia mafy sy mateza, matetika tamin'ny 18 X 16 harato, 0,011 savaivony projection, mety ...
Supply Fahaizana: 5000 Sheet / Sheets isan'andro
Aluminium varavarankely lamba atao amin'ny Al-mg firaka tariby tsotra fanenomana.
Aluminium tariby harato latsaka roa kilasy: Aluminium manezioma firaka tariby harato sy ny madio aluminium tariby harato , tenona amin'ny misaraka amin'ny aluminium firaka tariby sy madio tariby aluminium.
Al moka lamba Color: volafotsy mamirapiratra na saribao.
Aluminum firaka bibikely Fitiliana dia lafo kokoa noho ny Fiberglass harato fa mateza kokoa.
Aluminium projection dia mafy sy mateza, matetika tamin'ny 18 X 16 harato, 0,011 savaivony projection, mety ho ny ankamaroan'ny varavarana sy ny varavarankely fampiharana. Aluminium varavarankely lamba dia tsy harafesina na maty fotsy. Namatsy amin'ny horonana na notapatapahina farantsa.
Bibikely harato manana lanja mazava, tsara harafesiny fanoherana sy harafesina fanoherana
Fampiharana: Toy ny bibikely projection na aloky manohitra lalitra sy ny moka, milina fiarovana, rivotra ara-nofo sy ny fandraisana famantarana.
Koa izahay manome bibikely harato rafitra, izay natao manokana ho an'ny varavarankely sy ny varavarana, ary tonga lafatra ho an'ny ao an-toerana sy ny raharaham-barotra ny fampiasana.
Inona no mora no hametraka bibikely harato?
Bibikely harato dia tena mora ny hametraka. Ny karazany rehetra azo notapahina amin'ny hety mafy, ary avy eo dia nanambatra ny pejin'ireo fotsiny na glued ho toerana.
Mandra-pahoviana bibikely harato haharitra?
Ny androm-piainan'ny olona ny bibikely harato dia miankina amin'ny zavatra ampiasaina, ary inona matetika dia momba ny akanjo sy ny baomba. Ny tena mafy isika manao harato mivarotra dia natao tamin'ny vy, ary izany no hita ao na Stainless vy na aluminium.
Ny fiberglass sy PVC vy mifono harato dia mora kokoa ny safidy, fa noho izany izy ireo marefo kokoa ary tokony ho ampiasaina an-trano ihany. Na izany aza, ny biby harato dia be mahery ary natao avy polyester amin'ny fototry nylon.
Inona no maha samy hafa ny nitarina sy voatenona bibikely harato ?
Tena fotsiny, ny nitatra harato dia mahery ka mitandrina ny bikan'ny rehefa bends, kosa ny tenona harato dia be mora kokoa ny manapaka sy manenjana amin'ny endrika.
Aiza no azoko ividianana harato bibikely?
Raha te misy fanampiana amin'ny vidin masìna ianao, aza misalasala Miantso anay ao 0086-311-69013206 na mifandray aminay amin'ny alalan'ny mailaka na amin'ny aterineto amin'ny chat.
Previous: Chain Link Fefy
Manaraka: Nandrisika welded Gabion harato
Electro nandrisika Wire
Staninless Steel Wire harato